Yabala Andaara Galaana Yemenitti Garagalte Irra Kan Turan Reeffi Koolu Galtoota 25 Argamuun Ibsame
Koolu galtoota 200 baattee yaballi deemaa turte andaara galaana Yemenitti garagaltee reeffi koolu galtoota 25 argamuu hoogganoonni naannoo AFPf ibsaniiru.
Namoonni qurxummii qabaa turan AFPf akka himanitti konyaa gama kibbaa kan jiru bishaan Ras al-Ara irra safafaa kan ture ta’uu dubbatnii naannoon sun namoota seeraan ala nama deddeebisan kan keessa jiran ta’uun kan beekamuu fi jiraattonni naannoo” karra jaannabaa” jedhanii waamu jedhan.
Yaballi sun guyyoota lama dura kan garagalte yoo ta’u, namoota 160-200 baattee jirti jechuu dhaan angawaa naannoo Lahiij kan ta’an Jalil Ahimed Alii odeeffannoo namoota Yemen keessaa nama seeraan ala deddeebisan irraa argame jedhan tuquu dhaan ibsaniiru. Carraan namoota yabalattii irra turan ka biro hin beekamu.
Dhaabi koolu galtoota kan tokkummaa mootummootaa IOM yaballi naannoo sanatti bishaaniin liqimfamuu AFPf mirkaneessuu dhaan haala balaan sun itti uumame bal’inaan hubachuuf yaalaa kan jiru ta’uu ibsee jira.
Yemen waraanaan kan bututte ta’us, koolu galtoonni jireenya wayyaawaa Saud Arabiyaa fi biyyoota boba’aan badhaadhan kan hollaatti darbuuf amma iyyuu gamasitti yaa’uu itti fufaniiru.
IOM baatii kana akka gabaasetti, waggaa kana koolu galtoonni 5,100 ta’an Yemeniin kan seenan yoo ta’u, bara 2020 keessa kanneen 35,000 ta’an imaltuuf gamas ennaa dhqan, bara 2019 keessa weerarri vaayiresii koronaa utuu hin ka’in dura immoo 127,000tu godaanan jedhee jira.